Home » Crack & Activators » Ịrị elu nke tomb raider Crack maka PC
Ịrị elu nke tomb raider Crack maka PC
site Emily Kenzie | December 12, 2016
The Rise of ndị tomb raider Crack maka PC bụ ihe emereme na a nje ọgụ nke njem video egwuregwu. The storyline nke egwuregwu ndị a Lara Croft dị ka ọ na ha n'atụmatụ n'ime Siberia ke search of kpara n'obodo Kitezh. -Alụ a paramilitary ọha mmadụ na-Aims na-eti ya na obodo ahụ dị nkwa nke anwụghị anwụ. The egwuregwu tumadi-elekwasị anya lanarị na ọgụ. Ọzọkwa, a player ga-inyocha na odida obodo dị iche iche nhọrọ tombs.Camilla Luddington adahade azụ olu na kpere ya ọrụ dị ka Lara. Player nwere ịchịkwa Lara ebe dị iche iche na ọnọdụ dị ka alụ emegide, na finishing mgbaghoju anya n'elu ikpo okwu na ngalaba. Ọ na-eji dị iche iche Ngwa na-enwe ọganihu ma na-aga na site na akụkọ. Ọzọkwa, Lara nwere ike jiri gburugburu ebe obibi abara ya uru na egwuregwu. Ọ nwere ike zoo na bushes ma ọ bụ osisi. More na-akpali a na crafting Molotov cocktails na wuru grenade, -agbapụ akụ na ihe ịdọpụ uche ndị iro.
Camilla Luddington adahade azụ ekwusi okwu na kpere ya ọrụ dị ka Lara. Player nwere ịchịkwa Lara ebe dị iche iche na ọnọdụ dị ka alụ emegide, na finishing mgbaghoju anya n'elu ikpo okwu na ngalaba. Ọ na-eji dị iche iche Ngwa na-enwe ọganihu ma na-aga na site na akụkọ. Ọzọkwa, Lara nwere ike jiri gburugburu ebe obibi abara ya uru na egwuregwu. Ọ nwere ike zoo na bushes ma ọ bụ osisi. More na-akpali a na crafting Molotov cocktails na wuru grenade, -agbapụ akụ na ihe ịdọpụ uche enemies.Additionally, Lara nwere ike nke traversing n'elu ụlọ na nwekwara ike zere ọgụ kpam kpam site arịgo osisi. Dị iche iche nke ụta nwere ike iji sitere na otu ụmụ anụmanụ na ihe nke Lara nwere ike ichu nta ma na salvage. Lara si egbe, -arị anyụike wee shotgun, wakpo égbè onye ọ bụla ha variants na-na edinam. New ihe na Rise nke tomb raider Crack egwuregwu na-agụnye a ịchụ nta mma maka melee ma ọ bụ sinik ọgụ. A re-breather a na-kwukwara maka mmiri n'okpuru osimiri ngagharị, na a mkpọchi ghota na-emeghe ekpochi crates na doors.Platforming arụzi ụgbọala ndị a so n'ihe na-eyikwa egwu dị ka jumping n'ihu megide a vetikal mgbidi na igwu mmiri. Lura nwere ike ime jumping si ihu na ihu nakwa dị ka swinging na trapeze.
Ọzọkwa, Lara nwere ike nke traversing n'elu ụlọ na nwekwara ike zere ọgụ kpam kpam site arịgo osisi. Dị iche iche nke ụta nwere ike iji sitere na otu ụmụ anụmanụ na ihe nke Lara nwere ike ichu nta ma na salvage. Lara si egbe, -arị anyụike wee shotgun, wakpo égbè onye ọ bụla ha variants na-na edinam. New ihe na egwuregwu na-agụnye a ịchụ nta mma maka melee ma ọ bụ sinik ọgụ. A re-breather a na-kwukwara maka mmiri n'okpuru osimiri ngagharị, na a mkpọchi ghota na-emeghe ekpochi crates na doors.Platforming arụzi ụgbọala ndị a so n'ihe na-eyikwa egwu dị ka jumping n'ihu megide a vetikal mgbidi na igwu mmiri. Lura nwere ike ime jumping si ihu na ihu nakwa dị ka swinging na trapeze. The rise of the tomb raider PC crack solves your problems. Here are some features of rise of tomb raider crack.
Ịrị elu nke tomb raider Crack Game Nwere Magburu Onwe Atụmatụ
Player nwere ike ịmepụta ihe dị ka dị iche iche akụ na ụdị (nsi, bombu, eriri, climbable, ọkụ) na-egwu egwuregwu ahụ siri ike obibi site scavenging ihe si osisi na ụmụ anụmanụ.
Mmadụ na mmadụ na anụmanụ na-agụ akụkọ nwere ike na-eme ka a na ụbọchị na abalị okirikiri.
Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ oyi oge Lara ga-ichu nta a wolf nke na-abịa si n'oge a akpan akpan oge nke ụbọchị ike a hardier oyi uwe
Lara nwere ike igwu mmiri nke ga-atụkwasịrị ya ọgụ si eme.
Ndenye oge ihe:
Nwere ike ime dodging zere egbu egbu afia ke egwuregwu na ịrụ gụchara ọgụ na counters.
Mfe igwu egwu:
Ọ bụ a na-adọrọ mmasị ma dị mfe egwu egwuregwu na-eji ire ụtọ Nkea nhọrọ.
Mara mma Okirikiri ala na ndị mara mma ọnọdụ, ugwu ndị, etc. -enye player na-eche ihe niile na-eme n'ezie. -Eme ka player ga-esi ọzọ idem ke ya.
Olee otú Jiri & Crack Rise of tomb raider
Ugbu a Download egwuregwu si nyere button
-Eji dochie mgbape faịlụ site na egwuregwu directory